Sidee gacmo hagaagsan looga helaa guriga | Ragga Stylish
Sida wax walba oo la xiriira sawirka, yeelashada gacmo la soo bandhigi karo waxay u baahan tahay shaqo iyo xoogaa aqoon ah, in kastoo laga yaabo inay ka yaryihiin intaad u malaynayso.
Ka dhig aragti wanaagsan wareysiyadaada shaqo iyo taariikhahaaga adoo si joogto ah u uruurinaya una isticmaalaya seddexdan shay ee ay heli karaan qof walba.
Waxa ugu horeeya waa inaad jartaan cidiyaha sida ugu yar ee aad awoodid (ka tag dhererka saxda ah si aysan u dhaawicin). Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto ciddiyahaaga inay helaan A, masar goynta fudud kuma filna. Waxaad ubaahantahay manicure noocan oo kale ah oo kujira qalabkaaga, oo ku qalabeysan aalado sida feylasha iyo tweezers, oo kaa caawin doona geesaha siman oo ka saar maqaarro jilicsan oo maqaarka dabacsan.
Fiiro gaar ah: Ha isku dayin inaad ka jartid goyntaada guriga. Waxa ugu badan ee lagula talin karaa waa inaad gacmahaaga ku qooyaan biyo kulul 30 ilbidhiqsi ka dibna ku riix meesha ay ku dhasheen adigoo isticmaalaya spatula. Waad ogaan doontaa inaad dhammaysay markii bilaha cad ee sariirta ciddiyaha la muujiyo.
Wasakhda adag ee ciddiyaha cidiyaha hoostooda ayaa ka mid ah waraaqaha ugu xun ee daboolka. Mararka qaarkood, jajabku way gudbaan inkasta oo ay aad u gaaban yihiin oo ay gacmaheenna si joogto ah u dhaqdaan. Haddii aad burush u leedahay ciddiyahaaga, waxaad ku soo celin kartaa muuqaalladooda dabiiciga ah ilbidhiqsiyo gudahood waxaadna ka hor istaagi kartaa gacmahaaga inay ku dhawaaqaan inaad gurigaaga ku samaynaysay DIY ama saliid aad gelineyso mashiinka gaariga.
Isticmaal kareem gacmeed saliid iyo dufan la'aan maalin kasta sidee tahay Natiijadu waa maqaar jilicsan oo ku yaal gacmaha iyo cududda hore, oo sifiican looga ilaaliyo kuwa gardarada ah ee dibadda - taas oo calaamadaha gabowga, calaamadaha duleelada iyo cilladaha ku haya. Intaas waxaa sii dheer, ciddiyahaagu waxay u muuqan doonaan kuwo dhalaalaya waxaadna kaa caawin doontaa inaad googo'yaashaada ku hayso xaalad wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad gacmahaaga u sameysid waxay ka dhigayaan waxa ugu fiican ee suuragalka ah
Isbedelada cusub ee jaakadaha iyo jaakadaha deyrta / jiilaalka